WAR DEG DEG AH:Philippe Coutinho oo heshiis hordhac ah la gaaray Barcelona iyo qiimaha oo la shaaciyay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
WAR DEG DEG AH:Philippe Coutinho oo heshiis hordhac ah la gaaray Barcelona iyo qiimaha oo la shaaciyay
(07-12-2017) Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran tahay inay heshiis la gaartay Philippe Coutinho waxaana la ogaaday in ay ku qaadanayaan lacag dhan £ 128m waxaana uu saxiix doonaa shan sano oo heshiis ah.
Kubadsameeyaha Liverpool ayaa la rajeynayaa inuu u dhaqaaqo kooxda reer Catalan xagaaga marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaaga, isagoo dalbaday codsi isweydaarsi ah oo rajeynaya inuu keeno isbedel aan marnaba laga dhicin, inkastoo seddex dalab oo laga dalbaday.
Ernesto Valverde kooxdiisa ayaa la fahamsan yahay inay isku dayeyso inay isku daydo isku day kale oo bisha Janaayo, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo, heshiiska ayaa durbadiiba waxaa ogolaaday oo saxiixay ciyaaryahanka reer Brazil waxaana uu saxiixi doonaa heshiis shan sanno ah.
Coutinho ayaa dhaliyay 15 gool xilli ciyaareedkan Premier League iyo Champions League xilli ciyaareedkan, oo uu ku jiro seddexleey kulankii ay Red Devon 7-0 uga badisay Spartak Moscow habeenkii xalay.
Sikastaba 25-sano jirkaan oo ka tirsan kooxda Anfield tan iyo 2013-ka, ayaa la fahamsan yahay inuu heshiis la gali doono kooxda oo uu ku iibin doono marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaaga ka dib markii uu ku guul darreystay inuu xagaaga ka tago.